Ihange: I-Podcasting yamahhala, elula, ephathekayo ephathekayo | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 29, 2018 NgoLwesihlanu, Mashi 30, 2018 Douglas Karr
With Ihange, ungaqalisa ngokuphelele, uhlele, futhi uphathe i-podcast yakho ngqo kusuka efonini noma kudeskithophu yakho. Ihange likhululekile ngokuphelele ukusebenzisa ngaphandle kwemingcele yokugcina. Abasebenzisi bangathwebula wonke umsindo wabo ngohlelo lokusebenza lweselula lwe-Anchor noma balilayishe kusuka kudeshibhodi yakho online.
Hlanganisa amasegimenti amaningi njengoba ufuna esiqeshini (isb. Ingoma yakho yetimu, isingeniso, ingxoxo nesivakashi, neminye imiyalezo yomlaleli), ngaphandle kokwenza ukuhlela okuphambili.
Izici ze-Anchor Faka:
Izingxoxo Zehange - ikuvumela ukuba ushaye izingcingo zangaphandle.
Ukusabalalisa - hambisa ngokuzenzakalela i-podcast yakho kuzingxenyekazi ezinkulu ze-podcast (kufaka phakathi i-Apple Podcasts ne-Google Play Umculo) ngokuchofoza okukodwa nje.
Isidlali Esishumekiwe - Uma usunayo ibhulogi yakho noma iwebhusayithi, ungashumeka kalula i-podcast yakho lapho ukuze abantu balalele ngaphandle kokushiya isiza sakho. Thatha ikhodi yokushumeka kusuka kuphrofayela yakho kuhlelo lokusebenza leselula le-Anchor noma kudeshibhodi yakho ku-hange.fm.
Ihlombe - Noma ngubani olalele i-podcast yakho ku-Anchor angashaya ihlombe ngezikhathi zakhe azithandayo. Ihlombe liyaphikelela, ngakho-ke noma ngubani ozolalela kamuva uzokwazi (ngokuzikhethela) ukuzwa izingxenye ezijabulelwe abanye.
Amazwana womsindo - Abalaleli bangathumela imiyalezo yezwi embukisweni wakho noma kunini. Bazoba neminithi ukuphendula, okugcina yonke imilayezo yakho imifushane futhi imnandi.
Ukubhalwa okuzenzakalelayo - I-Anchor ibhala umsindo olayishwe ku-Anchor (ngaphansi kwemizuzu engu-3).
Amavidiyo Omphakathi - lapho ufuna ukuphromotha i-podcast yakho ezinkundleni zokuxhumana, i-Anchor ikhiqiza ividiyo ephathekayo, ebhaliwe ngendlela enhle kakhulu yesikhulumi ngasinye. Basekela isikwele se-Instagram, i-landscape ye-Twitter ne-Facebook, nesithombe sezindaba.
I-Podcast Analytics - Nge-Anchor, ungabona izinto ezifana nemidlalo yakho ngokuhamba kwesikhathi, ukuthi iziqephu zihlangana kanjani, nokuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza abantu abazisebenzisayo ukulalela. Uma abalaleli bakho besebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Anchor, ungabona nokuthi ngubani ozwile isiqephu ngasinye, nokuthi bashaya ihlombe noma babeke amazwana kuphi.
Qala i-Podcast yakho
Tags: yesikebheihange 3.0izici zehangeihange.fmi-podcastinguhlelo lokusebenza lwe-podcasting